चार्डपर्व र हिउँदमा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न विशेष योजना:: Naya Nepal
चार वर्षअघि लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि एक दशकदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएकोमा उनको कार्यकाल सकिएसँगै फेरि लोडसेडिङ हुने होकि भन्ने चर्चा अझै सेलाएको छैन । तर, प्राधिकरणले चाडवार्ड र आगामी हिउँदलाई लक्षित गरी योजना बनाएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आयात गरेर मागको आधारमा विद्युत् व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष योजना बनाएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए । “हामीले नजिकिँदै गरेका चाडवाड र हिउँदका लागि विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने गरी विशेष योजना बनाएका छौं,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको उत्पादन बढेको तथा भारतबाट समेत अपुग भएको अवस्थामा ल्याउन सक्ने व्यवस्थापन गरेकोले माग व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन ।”प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा बढीमा १५ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् माग पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा बढी माग १४ सय ७ मेगावाट पुगेको थियो । निजी क्षेत्रसहित प्राधिकरणको उत्पादन साढे १३ सय मेगावाट पुगेपनि आगामी हिउँदमा करिब एक तिहाई मात्र उत्पादन हुने कारण आन्तरिक उत्पादन अपुग हुन्छ, यसका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनका अनुसार प्राधिकरणको ५ सय ५० मेगावाट र निजी क्षेत्रको उत्पादन अहिले ६ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ भने कुलेखानी तेस्रोसहित १ सय ४ मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने कुलेखानीको जलाशय भरिएको छ ।
आगामी जनवरीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो युनिट अर्थात ७६ मेगावाट, त्यसैगरी फ्रेबु्रअरीमा सोही क्षमताको दोस्रो युनिट, अप्रिलमा तेस्रो युनिटसहित क्रमशः आउने हुनाले पनि त्यसले पनि हिउँदको माग व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । चालू वर्षदेखि हालसम्म १६ मेगावाट उत्पादन भइसकेको र आगामी दुई महिनामा अर्को १८ मेगावाट पनि थपिन लागेको छ । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइराला हिउँदका लागि ३ सय ५० मेगावाटसम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ल्याउन सकिने बताउँदै पहिला टनकपुरबाट ४० मेगावाट ल्याउने गरेकोमा ८० मेगावाटसम्म ल्याउने गरी पूर्वाधार तयार गरेको र बिहारबाट तीन सय मेगावाटसम्म तान्न सकिने भएकोले बिजुली प्रशस्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । “देशभित्र विद्युत् नपुगेको अवस्थामा मात्र भारतबाट ल्याउने तयारी छ, छिट्टै ढल्केबरको सवस्टेशन पनि ४ सय केभीमा चार्ज गर्दैछौं,” उनी भन्छन्, “अर्को वर्ष तामाकोशीसहित धेरै आयोजना निर्माण भइसक्ने भएकोले अझै सहज हुन्छ ।”विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादनसँगै वितरण व्यवस्थित गरी लोड सन्तुलन कायम गर्नका लागि योजना बनाएको छ । सबै फिडरहरू तयार अवस्थामा राख्न, ट्रान्सफर्मरहरू तयारी अवस्थामा राख्नका साथै ओभरलोड भएको क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि योजना बनाएको छ । “ओभरलोड भएर बत्ती गएमा बाहेक अन्य कुनै समस्या छैन । सबै फिडरहरूका साथै ट्रान्सफर्मर जाँच गरेर तन्दुरुस्त राख्नु राख्का लागि योजना बनाएका छौं,” उनी भन्छन्, “योजना अनुसारनै मैले प्राधिकरणका वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकसहित ७ प्रदेश र दुई डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।”
काठमाडौं । बजारमा बिक्री हुने दूध, प्रशोधित पानी र खाद्यान्न सबैभन्दा बढी दूषित र मिसावट हुने गरेको पाइएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पछिल्लो समय गरेको नमुना परीक्षणबाट दूध, पानी र खाद्यान्नमा मिसावट गरिएको फेला परेको हो ।
दूधमा कोलिफर्मको मात्रा बढी, पानीमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन र गरेको र खाद्यान्नमा लेबल केरमेट भएको तथा ढुसीसमेत परेको फेला परेको छ ।
विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले दूषित उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय पानी उद्योग, खाद्य उद्योग र दूधमा कैफियत भेटिएपछि ती उद्योगलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकुल असर पार्ने गरी दूषित उत्पादन गर्ने उद्योगलाई खाद्य ऐन अनुसार कारबाही गर्न लागिएको छ ।
विभागले खाद्य उद्योग, दाना उद्योग, होटेल रेष्टुरेन्ट, खाद्य पसल लगायतका खाद्य व्यवसायको अनुगमन गरेर ४ सय ३३ वटा नमुना संकलन गरेको थियो ।
संकलित नमुनाको परिक्षण गर्दा १४ वटा प्रतिकुल देखिएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
प्रशोधित पानीको दुई, दूधको पाँच वटा उद्योगलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन गर्ने दुई वटा खाद्य उद्योग र खाद्य व्यवसायीको उत्पादनमा रोक लगाई सिलबन्दी गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने खाद्य उद्योगी तथा खाद्य व्यसायीविरुद्ध कारबाहीको क्रममा रहेको २१ वटा मुद्दा कार्यान्वयनको क्रममा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
जसमा पाँचवटा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा वितरणमा रोक लगाई मुद्दाको बयान सकेर सरकारी वकिलको कार्यलयमा लैजाने क्रममा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
चाडपर्वको समयमा बजार हुन सक्ने खाद्यान्नमा मिसावट, ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि विभागले दैनिकजसो ३ वटा टोली परिचालन गरेर अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस : विसर्जन वा पुनःजागरण ?
२०७४ संघीय संसदको आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ १६५ सिटमा जम्मा २३ वटामा खुम्चियो नेपाली काङ्ग्रेस । सातवटा प्रदेश सभाको चुनावी नतिजा हेर्ने हो भन्ने एक ठाउँमा पनि खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन । स्थानीय निकायमा काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व त झन् कन्त बिजोग छ । पार्टी पराजित भएपछि चुनावी समिक्षा गर्न बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा नेतृत्व माथी नैतिकताको प्रश्न उठाउने प्रभावशाली केन्द्रिय नेतालाई अनुशासनको कारवाही गर्छु भन्न समेत भ्याए सभापति देउवाले । राणा परिवारमा बिवाह सम्बन्धमा बाँधिएपछी आफुलाई सम्रान्त राजघराना गनिएका देउवासंग भिड्न १३ औं अधिबेशनमा नेतृत्वको निम्ति गठन भएका विभिन्न नामधारी समूहबाट गएको तीन बर्षसम्मको उपलब्धि हेर्दा पार्टी नेतृत्वको अतिवाद रोक्ने हिम्मत देखिएन ।
चुनावमा पराजित भएर निराश भएका काङ्ग्रेस कार्यकर्ता केन्द्रिय नेतृत्वले पार्टी भित्र गरेको मनपरीतन्त्र र अधिनायकवाद कार्यशैली देखेर पूरै डिप्रेसनमा छन् । बिशेष अधिबेशन छल्दै आएको केन्द्रिय मुल नेतृत्वले अहिले नियमित अधिबेशन पनि छल्ने कसरतमा लागेको प्रष्ट देखिदैछ । गाउँघरका सामान्य कार्यकर्ताहरुले समेत ७० बर्ष पूरानो र ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस विसर्जनतर्फ उन्मुख भएको सजिलै महसुस गर्दैछन् ।
युद्धको मैदानमा सेनापतिको कमजोर कमान्डले पराजित सिपाहीहरुसंग दुईवटा विकल्प रहन्छ । पहिलो विकल्प युद्धको मैदान छोडेर भाग्ने । दोस्रो विकल्प आत्मसमर्पण गर्ने । त्यसैगरी अहिले नेपाली काङ्ग्रेससंग दुईवटा बिकल्प देखिन्छ । एउटा पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने । अर्को पार्टीलाई बिर्सजनतर्फ लैजाने । काङ्ग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने हो भने ‘जहानिया शासनको झल्को’ दिने पार्टी मुल नेतृत्वको मनपरितन्त्रको विरुद्धमा नेतृत्व इतरपक्षले बलियो नयाँ मोर्चा गठन गरेर आन्तरिक लोकतन्त्रको निम्ति आन्दोलन छेड्ने हिम्मत राख्न सक्नुपर्छ । ब्यक्तीको नामथरबाट गठन भएका विभिन्न गुट र समुह पुरै खारेजी गरिनुपर्छ । प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको निम्ति २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन र संविधान सभाको लागि २०६२/०६३को दोस्रो जनआन्दोलनको रणनीति अपनाउनु पर्छ ।
२०७४ को आमचुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस पराजित हुन्छ भन्ने कुरा १३औं महाधिवेशनमा बिजयी पार्टी मुल नेतृत्वको कार्यशैली र उसको हर्कतले पहिल्यै देखाई सकेको थियो । पार्टी भित्र ठूलै जोखिम उठाएर नेता र कार्यकर्ताको व्यापक विरोध सहेर काङ्ग्रेस सभापति देउवाले बाउलाई प्रधानमन्त्री छोरीलाई महानगरको मेयर दिएर प्रचण्डलाई आफनो निकट बनाए । कुर्चिको लागि प्रचण्डलाई खुशी पार्न जे पनी दिन देउवा राजी थिए । देउवा नेतृत्व काङ्ग्रेसको अलोकप्रियताबाट आफ्नो राजनितिक भबिष्य सुरक्षित नदेखेपछी आफ्नो मालिकलाई नै लात्तीले हानेर भाग्ने घोडा जस्तै गरे प्रचण्डले । संघीय चुनावमा आफ्नो साख बचाउन केपी ओलीको दौराको फेरो समाउन पुगे प्रचण्ड ।
आम नागरिक भन्दा आफुलाई बाठो ठानेर दुइटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर काङ्ग्रेस पराजित भएको भन्न सक्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई अलिकति पनि लाज शरम छैन । काङ्ग्रेस र राप्रपाको छुट्टाछुट्टै बलियो पार्टी संगठन भएको चितवन र रुपन्देहीमा किन पराजित भयो राप्रपा काङ्ग्रेसको गठबन्धन ? काङ्ग्रेस नेतृत्वसंग कुनै उत्तर नै छैन । किन कि पार्टी नेतृत्व आफ्नो गल्ती स्विकार्न तयार छैन । आगामी चुनावसम्म यहि नेतृत्वले निरन्तरता पायो भने काङ्ग्रेसको अस्तित्वमा नै संकट देखिदैछ । हो यस्तै कारणले काङ्ग्रेस विसर्जन उन्मुख हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ अहिले आम कार्यकर्ता माझ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र पार्टीको नेतृत्व गर्ने संस्थापन पक्षमा केही दम्भ, अहंकार र अतिवाद त हुन्छ नै । कुर्सीमा पुगेपछि शक्ति देखाउन पर्ने कतिको रहर र स्वभाव पनि हुन्छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक संस्कारलाई निस्तेज गर्न संसदमा प्रतिपक्षी दल, पार्टी भित्र संस्थापन इतरपक्षको प्रमुख भुमिका रहन्छ । शासकीय सुशासनमा सरकार संचालन गराउन र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टी संगठन चलाउन पार्टी भित्र र बाहिर नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको प्रस्तुति कमजोर देखिएकै हो । अर्बौं अर्बका भ्रष्टाचारमा सरकारका मन्त्रीसंग प्रतिपक्ष दलको नेताको नाम जोडियो ।
संसदमा प्रतिपक्षी दलको प्रभावकारी भुमिका निभाउन नसक्ने । सरकारसंग लाभका पदमा भागबन्डामा मिलाउन सुटुक्क प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिर्ने । यही कारण सरकारको गलत कार्यशैलीमा बिरोध गर्ने नैतिक धरातल त सकिगो नि । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थापन पक्षसंग नियुक्ति र मनोनयनमा हिस्सा खोज्न गएपछि आफूसंग पराजित इतरपक्षका नेतालाई देउवाले हेप्ने त भए नै । पार्टी हितको निम्ति कार्यकर्ताको मनसाय बुझेर ठिक कुरामा ठिकसंग अडान लिन नसक्ने । आफ्ना समकक्षी मित्र र सहपाठीलाई मिलाएर नेता बन्न नसकेपछि नेतृत्व असफल त हुन्छ नै ।
सरकारबाट भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचार र अत्याचारको मुद्दामा प्रतिपक्षी दलको नेताले संसदमा चुइक्क बोल्न, रोष्टम घेर्न नसकेपछि कङ्रेसका अरु दर्जनौं प्रभाबशाली नेताहरु विशाल आमसभा र ठुला मिडिया हाउसमा जति बिरोध गरेपनि केही अर्थ नरहदो रहेछ । ठिक त्यसैगरी कङ्रेस पार्टी नेतृत्वको बिपक्षमा ब्याक्तीका नामथरमा गठन भएका जनमत र नैतिक धरातल भए नभएका विभिन्न समूहहरुमा द्वय चरित्र देखिएका कारण सभापति देउवालाई पार्टी भित्र मनपरितन्त्र चलाउन, आफू अनुकुल पार्टी संचालन गर्न सजिलो भएको कुरा सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ ।
अहिलेको पार्टी नेतृत्वबाट नेपाली काङ्ग्रेसको भबिष्य अन्धकार देख्नेहरु, आगामी चुनाबमा काङ्ग्रेसको जनमत बढाएर पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउन खोज्नेहरु सबै एक हुन जरुरी छ । १२औं र १३औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि मतदाताबाट उत्कृष्ट मत प्राप्त गरेका, नैतिकवान, स्वभिमान, निडर, विचारमा अडिग र नेतृत्व क्षमता भएका वरिष्ठतम् र लोकप्रियताका आधारमा नेतृत्व इतरपक्षको नाममा नयाँ बृहत टिम गठन गर्ने । पचास प्रतिशत केन्द्रिय शिर्ष नेता र पचास प्रतिशत जुझारु, सादगी र निष्ठावान युवा नेताहरूको संयुक्त ८/१० जनासम्मको बोर्ड अफ कमिटी बनाउने । यो शक्तिशाली टिमको मुख्य उद्देश्य लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निश्चित समय भित्र निष्पक्ष रुपमा १४औं महाधिवेशन गराउन पार्टी नेतृत्वलाई बाध्यकारी बनाउने । नेतृत्वलाई दवाब दिन जिल्ला सभापतिहरुको भेला, महासमितिको बैठक, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु परिचालन, आम कार्यकर्ता माझ गएर पार्टी हितको के गर्न सकिन्छ भनेर राय सल्लाह र सहयोग लिने सक्ने हैसियत देखाउने । अधिनायकवाद उन्मुख अहिलेको पार्टी नेतृत्वलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ल्याउन त्यति सजिलो कसैले नठाने हुन्छ ।अधिबेशन सुनिश्चित भएर मनोनयन गर्ने केही दिन अघि मात्र आगामी पार्टी नेतृत्वमा सर्वसहमतीको बहस गर्न खोज्दा नै बढी श्रेयकर होला ।
अघिल्लो अधिबेशनमा सभापतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले आफू अभिभावकत्वको ग्रहण गरेर पार्टी हितको निम्ति बलियो टिम गठन गर्न मार्ग प्रसस्त गरिदिंदा उनको राजनैतिक हाईट अझ बढ्ने छ । कोइराला परिवारको कृपा र आशीर्वादले सरकार र पार्टीको उच्च ओहादामा पुगेका कृष्ण सिटौला अघिल्लो अधिबेशनका अर्का सभापति उम्मेदवार हुन् । जम्मा ३२४ मतको हैसियत भएपनि गगनलाई साथ लिएर गुटको नेता बनेका सिटौला आफुलाई सबैभन्दा बाठो सम्झिन्छ्न । काङ्ग्रेस भित्र र देशको समग्र राजनीतिमा ठुलै महत्व र अर्थ राख्ने नेता गगन कुमार थापाले सिटौला माथि निर्भर भएर राजनैतिक उचाई घटाउनु हुँदैन । आम कार्यकर्ताहरुको भावना बुझेर नयाँ बृहत् टिमको कमान्डिङ बोर्डमा समाबेश भएमा उनीसंगै र काङ्ग्रेस पार्टीको निम्ति बेहत्तर हित हुन सक्छ ।
आफनो कार्यकालमा समयमै अधिबेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गराएका नैतिकवान नेबिसंघ पुर्वअध्यक्ष बिश्वप्रकाश शर्मा सिटौलाको कारणले देउवाको शरणमा पुगेको धेरैको बुझाई छ । नेता सिटौला र शर्माको स्वभाव र आचरण हेर्दा नेतृत्वको पदाधिकारी हुनेगरि कृष्ण सिटौला देउवा टिममा र प्रवक्ता शर्मा नेतृत्व इतरपक्षको बृहत टिममा सहभागी भएमा नेता शर्माको राजनीतिक उचाई र पार्टीको भबिष्य उज्ज्वल देखिन्छ ।
१२औ महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका नेता प्रकाशमान सिंह पार्टीमा संगठन र काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकार संचालनमा प्रभावकारी भुमिका खेल्ने नेता हुन भनेर भन्नेहरु प्रशस्त छन् । आफ्नो कार्यकाल स्वर्णिम बनाएका नेता सिंह अधिबेशन सुनिश्चित गर्न, पार्टी भित्रको मनपरितन्त्रलाई निस्तेज गर्नको निम्ति नेतृत्व लायक नेता हुन भनेर विश्लेषण पनि गरिन्छ । नेतृत्व इतरपक्षमा देखिएका विभिन्न ब्यक्ती एवं समूहलाई ब्यावस्थापन गरि बृहत्त सामूहिक टिमको नेतृत्वमा नेता सिंहलाई अगाडी ल्याउँदा कार्यकर्तामा थप उत्साहले नेपाली काङ्ग्रेसमा पुनर्जीवन ल्याएर पार्टी विसर्जन उन्मुख हुनबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने थोरै भएपनि आश राख्न सकिन्छ ।